Kutheni ngu-Annie Lennox - Izinto Zobugcisa
Kutheni ngu-Annie Lennox
Lo yayinguye wokuqala ongatshatanga u-Annie Lennox okhutshwe emva kokuqhekeka kwe-Eurythmics ngo-1990, i-duo yakhe no-Dave Stewart. Ngokungafaniyo noStewart, uLennox usengenisile kwaye uhlala ezibuza. Kwaye ngelixa uStewart wayehlala ekhuthaza kakhulu, wayengaqinisekanga ukuba angenza umculo ngaphandle kwakhe.
Ngo-Novemba ngo-2007, uLennox waxoxwa kakhulu noMalcolm Bragg Umboniso weBhanki yoMzantsi . Kule nkqubo wathi 'Kutheni' yayiyingoma yobuqu enxulumene nokuhamba kwakhe yedwa; Wayengaqinisekanga ukuba angazibhala ngokwakhe iingoma, okanye apho aya khona emculweni okanye ebomini. Kuthathe malunga nemizuzu eli-10 ukubhala. 'Kuyamangalisa,' wongeze, 'Ezinye iingoma zinjalo, ngelixa ezinye zingenjalo.'
'Kutheni' wabonisa ukuba uLennox uneempahla zokuhamba yedwa, into abalandeli bakhe abasele beyazi. Itshathiwe kwimimandla eliqela kwaye inyanzelisa i Diva i-albhamu kwi # 1 e-UK. I-albhamu ithengiswe ngokukodwa eMelika, ihambisa iikopi ezingaphezu kwezigidi ezi-2.
U-Lennox wayenokuninzi aza kubhala ngako xa wayeqala ukusebenza kwi Diva i-albhamu: Wayesandula ukuba ngumama, utata wakhe wasweleka, kwaye wayeqala ukuba ngumculi yedwa. Zonke ezi mbandezelo zidityanisiwe kule ngoma, apho abuza khona umbuzo olula: Kutheni?
Xa ubuzwa ngale ngoma kwincwadi kaDaniel Rachel Ubugcisa beNgxolo: Incoko nababhali beengoma eziBalaseleyo , U-Lennox uphendule wathi: 'Inene yile nto thina bantu sifika kuyo xa siqonda ukuba amaqhina kunye nokujijisana kubudlelwane akunakuphazanyiswa, kwaye sishiyeke sijamelene nombuzo omkhulu ngaphandle kwesisombululo. Ngoba? Ngoba? Ngoba? Asikhe sonke sibuze loo mbuzo ngathi nangendalo yonke? '
U-Annie Lennox ubhlogiwe malunga nale ngoma, xa wayenyusa i-albhamu yakhe ka-2009: 'Ndicinga ukuba le ngoma iveza into ethi' Ndifuna ukuma, ndiyitsho le nto. ' Iphantse yangqina, ' Indlela yam , 'okanye enye into. Umhlaba ungangxama ngamanye amaxesha, ke ngoko uzifumanisa uzama ukufumanisa ... Kukwanje ngokujonga umphumo wezinto. Emva kwabo bonke obu bumnyama kunye nokuphoxeka ngamadabi akho oye wagqitha kuwo ... Ukucinga ngomlotha wamava, kunye nokubuza ukuba ingaba ibisithini. Kufana neentsalela zesakhiwo esiye sadilika saza satsha. '
U-Lennox ubhale ngokwakhe lo mzila, kodwa wayenoncedo oluninzi lokuyidibanisa. Owayesebenza kunye naye yayinguMarius De Vries, umdlali webhodi yezitshixo / umdwelisi weprogram owayesebenza kwingoma. Yaveliswa nguStephen Lipson, owayesebenze kwi-albhamu kaFrankie Goes To Hollywood Wamkelekile kwi-Pleasuredome .
Oku kwaphumelela i-Ivor Novello Award ka-1992 yeNgoma eNgcono kakhulu kwezomculo nangobuchule.
Ividiyo yomculo, ekhokelwa nguSophie Muller, inika uLennox ulungiselela ukufota. Iqhotyoshelweyo liphumelele iVidiyo yaBasetyhini abaBalaseleyo kwiiMbasa zoMculo zeMTV zeMTV zika-1992. UMuller ukwalathise umboniso kaLennox 'Ukuhamba kwiglasi eyaphukileyo,' 'intaka encinci' kunye 'neNgelosi.'
U-Lennox wayeneminyaka engama-37 xa kwakhutshwa icwecwe. Ukuziqhelanisa nokukhula kwakhe kwaba nefuthe kule ngoma. Ndizive ndisemngciphekweni wokuguga, kodwa mhlawumbi ndingafana no-Edith Piaf, ndinoluvo lwengoma yosizi okanye yokudandatheka, utshilo. Q Ndicinga ukuba 'Kutheni' ndinayo encinci. Mhlawumbi abantu bayakuxabisa ukuthungwa kobudala kum. Okanye mhlawumbi ndiza kuziva ukuba ndimdala kakhulu, ngumdlalo wabantwana, kwaye ndiye kubhala umculo wefilimu. '
U-Lennox wenze oku kwimidlalo ye-TV emininzi, kubandakanya Phezulu kweePops kwaye NgoMgqibelo ebusuku .
Ingoma evezwe kwifilimu ka-1995 Amakhwenkwe Ngasecaleni .
Umculi waseSpain u-DJ Sammy urekhode ingoma yeTrance yale ngoma ngo-2005 ngezwi likaBritta Medeiros.
Ingoma yayigqunywe nguMichelle Chamuel kwi-NBC's Ilizwi Inguqulelo yakhe yafika kwi # 92 kwi-Hot 100 emva kokuba eyicule kumdlalo wokugqibela.
xa imvula ingena ebusweni bakho
iphume nini iparadesi yemigulukudu
Ndiyazi ngoku ukuba yonke into izakulunga
4 i-eyez yakho kuphela j cole enentsingiselo
Ingelosi ye2 inentsingiselo
esinye isitena eludongeni inxenye 1